Ny antony nahatonga ny tornadoes sy ny fomba hamoronana azy ireo
Inona no atao hoe Tornado?
Ireo mponina ao an-toerana dia nanamarina ny fahasimban'ny fiara tao amin'ny toeram-pivarotana iray taorian'ny nandravahana azy tamin'ny alatsinainy 29 Aprily 2008 tao amin'ny faritry ny Fork King of Suffolk, Virginia. Tornadoes telo no nikitika tany amin'ny faritra afovoany sy atsimo andrefana, izay nandratra olona farafaharatsiny 200. Saripikan'i Alex Wong / Getty Images
Ny tadio dia tsangatsangan'ny rivotra rotaka hita maso rehefa maka ny korontana eny an-tany na eny amin'ny rivotra. Matetika ny tadio dia tsy hita. Ny lafiny manan-danja amin'ny famaritana dia ny fifandraisana amin'ny tany ny tafio-drivotra na ny rahona. Mipoitra avy any amin'ny kumulonimbus ny rahon'ny rahona. Ny tanjona tokony hoeritreretina dia tsy hoe famaritana marina io famaritana io. Araka ny filazan'i Charles A. Doswell III ao amin'ny Fikambanana Miara-miasa momba ny Fikarohana momba ny toetrandro momba ny toetrandro, dia tsy misy famaritana marina momba ny tadio iray izay nekena hatramin'izao ary navoakan'ny mpahay siansa.
Ny hevitra iray izay ankatoavin'ny ankapobeny dia ny tadradrano dia iray amin'ireo ratsy indrindra, ary ny herisetra indrindra, amin'ny karazam-boka mahery vaika rehetra. Tornadoes dia azo raisina ho toy ny tafiotra an-tapitrisany dolara raha toa ka maharitra ela ny tafio-drivotra, ary manana haavo haingana mba hanimba ny fananan-tany. Soa ihany, ny ankamaroan'ny tornados dia fotoana fohy, maharitra mandritra ny 5-7 minitra eo ho eo.
Ny ankamaroan'ny tornadoes any amin'ny Ila Bolantany Avaratra dia mitodika manohitra ny famantaranandro na ny sikonika. Ny 5% -n'ny tornadoes ao amin'ny Ila Bolantany Avaratra no mamadika ny famantaranandro na anticyclonically. Raha toa ka toa ny vokatry ny Coriolis ny voalohany , dia efa saika haingana ny tornados rehefa manomboka izy ireo. Noho izany, tsy dia misy dikany ny fiantraikan'ny Coriolis amin'ny fihodinana.
Nahoana àry ny tnadao no miova tsikelikely? Ny valiny dia hoe ny tafio-drivotra dia mitodika amin'ny tari-dàlana ankapobeny toy ny rafitra ambany fanesorana azy ireo. Noho ny rafi-tsoratry ny faneriterena ambany dia manohitra manohitra ny tsipika (ary izany dia vokatry ny Coriolis), ny fihodinan'ny tornado dia mandova ihany koa avy amin'ny rafitra ambany. Satria ny rivotra dia aingam-panahy ao amin'ny famolavolana, ny fitarihana ny rotaka dia manohitra tsipika.
Isan-taona dia misy tadona an-jatony maro manerana ny faritra manerana izao tontolo izao. Na izany aza, dia maro amin'ireo tornados no mitranga any amin'ny faritra avaratr'i Etazonia midadasika any amin'ny faritra fantatra amin'ny hoe tornado . Any Etazonia dia misy ny singa miavaka misy ny geology eo an-toerana, ny halalin'ny rano, ary ny hetsiky ny sisintany eo anoloana dia mahatonga an'i Etazonia ho toerana voalohany ho an'ny fananganana tornados. Raha ny marina dia misy antony 5 lehibe indrindra i Etazonia no mafy indrindra amin'ireo tornados.
Inona no mitranga any Tornados?
Ny fototry ny fananganana Tornado
Ny tornada dia novokarina rehefa nihaona ny vahoaka roa samy hafa. Rehefa manangona vahoaka mafana ny rivotra mafana sy mafana, dia mety hiteraka hafanana ny andro iainana. Amin'ny adin'ny tornado , ny vahoaka an'habakabaka any andrefana dia mazàna ny onjam- peon'ny onjan'ny kontinanta midadasika izay midika fa tsy misy vinaingitra kely ny rivotra. Ity rivotra mafana sy maina ity dia mameno ny rivotra mafana sy mafana ao amin'ny Central Plains izay mamorona siramamy. Zava-malaza fantatra fa matetika ny tornados sy ny tafio-drivotra mahery dia mamoaka loharano.
Ny ankamaroan'ny tornadoes dia mitambatra mandritra ny kotrokorana mahery avy amin'ny fihodinana mahery vaika. Heverina fa ny fahasamihafana eo amin'ny fihodinan'ny rivodoza dia mpandray anjara amin'ny fihodinan'ny tadio. Ny fihodinan'ny haavony lehibe ao anatin'ny kotrokorana mafy dia fantatra amin'ny anarana hoe mesocyclone ary ny tornado dia fampivoarana io mesocyclone io. Ny fampisehoana an-tsary tena tsara amin'ny tornado dia azo avy amin'ny USA Today.
Tornado sy vanim-potoana
Ny fanjakana tsirairay dia manana fotoana lehibe ho an'ny tadio. NOAA Laboratoara Mandritra ny Tafio-drivotra
Ny andron'ny andro ho an'ny Tornado
Tornadoes matetika no mitranga amin'ny andro, araka ny tatitra momba ny vaovao, fa mitranga koa ny tornadoesin'ny alina. Isaky ny misy oram-baratra mahery vaika, dia mety hisy tornado. Ny tadona alina dia mety hampidi-doza indrindra satria sarotra ny mahita azy.
Ny vanin-taonan'ny Tornado dia teny ampiasaina ho toy ny torolalana ho an'ny ankamaroan'ny tornada tonga any amin'ny faritra. Raha ny tena izy dia misy tadio afaka mitokona amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Raha ny marina, ny tadada Super Super dia tonga tamin'ny 5 sy 6 febroary 2008.
Ny vanin-taonan'ny Tornado sy ny haben'ny tornados dia mifindrafindra amin'ny masoandro. Rehefa miova ny fizaran-taona dia toy izany koa ny toeran'ny masoandro eny amin'ny lanitra. Ny fisian'ny tornado taty aoriana tamin'ny lohataona, dia mety kokoa ny avaratr'i tornado any avaratra. Araka ny fikambanana Amerikanina Meteorolojika, ny hafanam-be tamin'ny tornado dia nanaraka ny masoandro, ny hazakazaka jetan'ny haavo midina, ary ny avaratra manosika rivotra mangatsiaka .
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia manantena ireo tornados any amin'ireo firenena any amin'ny Faritany Atsimon'i Afrika kokoa ny lohataona. Raha mandroso ny lohataona dia afaka manantena ianao fa hihoatra ny fe-potoana faran'izay haavon'ny tornados ho any amin'ny fanjakana Central North Plains.
Na dia mieritreritra ireo tornados aza ny ankamaroan'ny ankamaroan'ny olona, ​​toy ireo andian-jiolahy mihodinkodina eny an-tanety, dia mety hitranga ihany koa ny tornados. A waterspout dia karazam-pitaovana izay mamoaka rano. Matetika no malemy ireo tornadoesy ireo, saingy mety hiteraka fahavoazana amin'ny sambo sy fiaramanidina fialamboly. Indraindray, ireo tornados ireo dia afaka mifindra any amin'ny tany izay miteraka fahavoazana lehibe.
Tornadoes izay avy amin'ny oram-baratra mahery vaika dia matetika ny karazana tornado mahery sy manan-danja indrindra. Ny ankamaroan'ny havoana goavana sy tornadoes mahery dia mahery vokatry ny oram-baratra mahery vaika. Matetika ny tafiotra dia misy rahona miorina sy rahona matevina .
Raha toa ny devoly amin'ny vovoka dia tsy tadio araka ny tena dikan'ny teny, dia karazana vortex io. Tsy vokatry ny oram-baratra izy ireo ary noho izany dia tsy misy tornado marina. Ny vovoka amin'ny vovoka dia mipoitra rehefa ny masoandro dia manasitrana ny tany maina izay mamoaka rivotra mitsoka. Mety ho toy ny tadio ny tafio-drivotra saingy tsy izany. Ny rivo-doza dia tena malemy ary tsy miteraka fahasimbana be. Any Aostralia, misy devoly vovoka iray antsoina hoe volombava. Any Amerika, ireo tafiotra ireo dia nofaritana ho rivodoza tropikaly.
Toy ny oram-batravatra sy fivoahana, ny gustnado (indraindray antsoina hoe gustinado) dia mivoaka avy ao amin'ny fivoahan'ny rivotra avy amin'ny tafio-drivotra. Ireo tafiotra ireo dia tsy misy tornadoes tena marina, na dia mifandray amin'ny oram-baratra aza izy ireo, fa tsy toy ny devoly vovoka. Tsy mifandray amin'ny rahona ny rahona, izay midika fa ny rotaka dia sokajiana ho tsy misy tadradrano.
Derechos dia hetsika hitroka tampoka, fa tsy tadrado. Ireo rivodoza ireo dia mamoaka rivotra mahery avy amin'ny rivotra ary mety hiteraka fahavoazana toy ny tornado.
Ahoana no fomba ianarana ny Tornadoes - Ny Tornado Forecasts
Ity dia "Dorothy" avy amin'ny sarimihetsika "Twister". Chris Caldwell, zo rehetra voatokana, nahazoana alalana
Nodinihina nandritra ny taona maro ny tornada. Ny iray amin'ireo sary tranainy indrindra amin'ny tornado nakambana dia nentina tany Dakota-Dakota tamin'ny taona 1884. Noho izany, na dia tsy nitombina be aza ny fanadihadiana lehibe nanomboka tamin'ny taonjato faha-20, dia nanjary loharanom-pahagagana ny tornados hatramin'ny taloha.
Mila porofo? Mahatsiaro ny tardadoeso ny olona ary voahosihosy. Eritrereto ny lazan'ilay mpilalao sarimihetsika Twister tamin'ny taona 1996 nilalao an'i Bill Paxton sy Helen Hunt. Tao amin'ny faniratsiràna ironiona, ny toeram-pambolena izay nalaina tao amin'ny sarimihetsika akaikin'ny farany dia an'i J. Berry Harrison Sr. Ny toeram-pambolena dia ao Fairfax, tokotokony ho 120 miles avaratra atsinanan'i Oklahoma City. Araka ny voalazan'ny Associated Press, nisy tornado tena nahavoa ny toeram-pambolena tamin'ny May 2010 rehefa tapitra ny antsasak'ireo tantsaha tapaka nandritra ny oram-baratra tany Oklahoma.
Raha mbola nahita ny sarimihetsika Twister ianao dia hahatsiaro tokoa i Dorothy sy ny DOT3 izay ny fonosan'ny fitaovana ampiasaina eo anoloan'ny tadio. Na dia fiction aza ny sarimihetsika, dia tsy dia lavitra loatra ny siansa momba ny sarimihetsika Twister. Raha ny marina, tetikasa iray mitovy amin'izany, izay antsoina araka ny tokony ho izy hoe TOTO (Totable Tornado Observatory) dia fanandramana ara-pihetseham-po tsy dia mahomby noforonin'ny NSSL mba handinihana ny tornados. Ny tetikasa iray hafa dia ny tetikasa VORTEX voalohany .
Tena sarotra be ny fanombohan'ny tornados. Ny mpikaroka dia tsy maintsy manangona angon-drakitry ny toetrandro avy amin'ny loharano samihafa ary mandika ny vokatra amin'ny avo lenta. Amin'ny teny hafa, mila manana ny marina momba ny toerana sy ny mety hisian'ny tadio izy mba hamonjena aina. Saingy tokony handresy ny fandanjana tsara mba hahafahan'ireo fampitandremana maro, izay mitarika ho amin'ny fisavoritahana tsy ilaina, dia tsy navoaka. Ny ekipan'ny meteorologists dia manangona angona momba ny toetr'andro amin'ny tamba-jotra teknolojian'ny finday, anisan'izany ny mesonet mobile, ny Doppler-on-wheels (DOW), ny fantson'ny balona, ​​ary ny maro hafa.
Mba hahatakarana ny fananganana tornadoeso amin'ny angon-drakitra, ny manam-pahaizana momba ny morontsiraka dia tsy maintsy mahatakatra tanteraka ny fomba, rehefa, ary ny toerana misy tornada. Ny VORTEX-2 (Fanamarinana ny niandohan'ny rotaka tamin'ny fanandramana Tornadoes - 2), natsangana ho an'ny 10 Mey - 15 Jona 2009 sy 2010, dia natao tamin'izany. Tamin'ny fanandramana tamin'ny taona 2009, dia nisy tornado nipoitra tao LaGrange, Wyoming tamin'ny 5 Jona 2009, no lasa tônàma mazàna indrindra nodinihina teo amin'ny tantara.
Fikirakirana ny Tornado - Fahaizana Fujita Enhanced
Ny tornada dia nampiasaina ho sokajy araka ny ambaratonga Fujita . Ny fampiroboroboana an'i Ted Fujita sy ny vadiny tamin'ny taona 1971, dia ny marika manerantany no malaza amin'ny fanamafisana ny tadio. Vao haingana, nohavaozina ny haavon'ny Fujita Enhanced mba ahafahana mampiavaka ny oram-baratra mifototra amin'ny fahavoazana.
Misy tadrado maro samihafa izay malaza eo amin'ny fiainan'ireo olona voakasika amin'ny rivo-doza. Maro no nanamarika noho ny antony hafa. Na dia tsy nomena anarana toy ny rivo-doza aza ny tornados, dia matetika ny anaran'ny mpampihorohoro no miorina amin'ny toerana misy azy na ny lozam-piarovana. Ireto misy vitsivitsy:
The Super Outbreak 1974
The Tornado Palm Sunday
Ny Tornado Air Force Base an'ny McConnell
Ny Tornado Waco
Ny Tornado Tri-State
Ny Super Tuesday Tornado
NOAA Center Prediction Center
Misy antontan-taratasy an-tapitrisany an-tapitrisa momba ny tornados. Ny zavatra nataoko teto dia ny hanangona lisitr'ireo tranganà tornado. Ny zava-misy tsirairay dia novaina ho marina. Ny references ho an'ireo antontan'isa ireo dia hita ao amin'ny pejy farany amin'ity rakitra ity. Ny ankamaroan'ny antontan'isa dia mivantana avy amin'ny NSSL sy ny National Weather Service.
Firy ny tornada namely an'i Etazonia isan-taona?
Hafiriana no lasa farany ny tadio?
Ankoatra an'i Etazonia, inona ireo toerana hafa mahazo tadona maro?
Mety hampisy rivo-doza ve ny rivo-doza?
Tokony hanokatra ny varavarako ve aho mandritra ny tornado?
Ny fametrahana ny tsindry ny rivotra ao amin'ny trano iray amin'ny fanokafana varavarankely dia tsy mampihena ny DAMAGE. Na ny tadrada mahery indrindra (EF5 amin'ny haavon'ny Fujita Enhanced) aza dia tsy manamaivana ny tsindry ahafahan'ny rivotra miditra ka mahatonga ny trano "hipoaka". Avelao ny varavarankely irery. Hanokatra izany ho anao ny tadio.
Tokony hitoetra any atsimo ve aho?
Ny zoro atsimoandrefan'ny tranobe iray dia tsy toerana azo antoka indrindra amin'ny tadio. Raha ny marina, ny toerana ratsy indrindra dia eo anilany izay manatona ny tazoado ... matetika ny atsimo na ny atsimo-andrefana.
Moa ve ny tornadoeso ny karazana toetrandro ratsy indrindra?
Tornadoes, raha mampidi-doza, dia tsy ny karazana toetrandro ratsy indrindra. Ny rivo-doza sy ny tondra-drano dia miteraka fahasimbana betsaka kokoa ary mamela olona maro maty amin'ny fiakarany. Mahagaga, ny karazana zava-mitranga goavana indrindra amin'ny toetr'andro ratsy matetika no tsy manantena azy - Izany no hain-tany. Ny fisotroan-drongony, arahin'ny tondra-drano, dia sombiny amin'ireo hetsika amin'ny toetr'andro be loatra indrindra eran-tany. Matetika loatra ny fisotroan-drongony raha vao manomboka ny fahasimbana ara-toekarena dia mety ho sarotra ny hamandrika.
Moa ve ny tetezana sy ny fialofana amin'ny toeram-pialofana azo antoka amin'ny tadio?
Ny valiny fohy dia TSIA . Manjary tsy mampidi-doza ivelan'ny fiaranao ianao raha oharina amin'ny ao anatiny, fa tsy misy fiarovana koa ny fifanarahana. Ny tetezana sy ny pasipaoro dia tsy toerana azo antoka ho amin'ny tadio. Ianao dia ambony noho ny tany, amin'ny rivotra mahery kokoa, ary eo amin'ny lalana izay misy ny fako manidina.
Manao tranokala ve ny tornados?
Tornadoes dia tsy tratran'ny tanàna sy tanàna lehibe
Ny olona rehetra dia mety ho mpangalatra fiaramanidina
Ny radarandro foana mahita trompetra foana
Tornadoes dia tsy naharatrana indroa teo amin'io toerana io
Inona no atao hoe Tornado? nataon'i Charles A. Doswell III, Fikambanana mpiara-miasa momba ny fikarohana momba ny toetrandro momba ny metolojika, Norman, OK
Ny Taom-baovao Golden Tornado Fampandrenesana avy amin'ny National Weather Service The Online Tornado FAQ
Aiza ny Tornadoes Form
Tornado Alley dia anaram-boninahitra nomena ny toerana tsy manam-paharoa any Etazonia izay mety hahavoa ny tornados. Tornado Alley dia ao amin'ny Central Plains ary ahitana an'i Texas, Oklahoma, Kansas, ary Nebraska. Anisan'izany i Iowa, Dakota Atsimo, Minnesota, ary ampahany amin'ireo fanjakana hafa manodidina. Misy antony 5 lehibe indrindra ananan'i Etazonia ny fepetra tena tsara ho an'ny fivoaran'ny tornado.
Ny lemaka afovoany dia efitra lavorary tonga lafatra eo anelanelan'ny Rockies sy ny Appalachians izay mamorona tifitra kely ho an'ny rivotra mangatsiaka mangatsiaka mba hifandonana amin'ny rivotra mafana avy any amin'ny faritra afovoany.
Ny firenena hafa dia voaaro amin'ny sisin-tany na faritra ara-jeografika eo amin'ny kirany, izay manakana ny rivo-doza mahery toy ny rivo-doza tsy ho tonga eny ambony eny.
Ny haben'ny Etazonia dia lehibe, ka mahatonga azy ho tanjona lehibe ho an'ny andro ratsy.
Ny habetsaky ny moron-dranomasina any amin'ny faritr'i Atlantika sy Gulf Coast dia mamela ny tafio-drivotra goavam-be izay mamorona ao Atlantika mba hankanesany any amin'ny faritra amorontsiraka, izay matetika mamokatra tornadoeso avy amin'ny rivo-doza .
Ny tontolon'ny Ekaterina Avaratra sy ny Gulf dia mikendry an'i Etazonia, izay mitondra andro maromaro kokoa.
Mampianatra momba ny Tornadoes
Ity drafitry ny lesona manaraka ity dia loharanom-pampianarana lehibe momba ny tornada.
Firy ny oram-batravatra isan-taona?
Tokony hanenjika an'io rivo-doza io ve aho?
Ahoana ny fandehan'ny rivotra?
Raha manana hevitra na lesona hafa tianao hapetraka ianao dia aoka ho azo antoka ny hifandray amiko. Faly aho handefa lesona noraisinao tany am-piandohana.
Rain, Snow, Sleet, ary ny karazany hafa
Ny vanim-potoanan'ny rivo-doza Eastern Pacific
Ny Science of Snowflakes
Mangatsiaka ny orana: misy orana ve sa orana?
Aiza no ahitana ny sarintany fitadiavana rivo-doza tsara indrindra
Miaina amin'ny tselatra: Firenena 10 miaraka amin'ny rivotra mahery indrindra
Toetran-java-maneno: Visual Cues amin'ny Tornado Averina
Ahoana ny fampiasana tabilao momba ny rivo-doza
Ny toetrandro amin'ny toetr'andro izay mampihena ny fampiononana
Fandrosoana ny soavaly
Lisitry ny mpifankatia mahafinaritra
Tetikasam-pividianana mora vidy ho an'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany tany Haiti
Il ya - teny sy teny
Manaova sarina sariitatra malaza havanana
Fanokafana ny McDonald voalohany
Fanitsiana sy famerenana ny Aleph Paulo Coelho
Ny Anjara asan'ny Mpifanaraka ao amin'ny vanim-potoana barock sy kilasy
Revolisiona Amerikana: Yorktown & Victory
Amin'ny fampiasana ny 'Verb Creer'
Saginaw Attic State University
Ady An-trano Amerikanina: Battle of Globe Tavern
Shina Silo sy ny lalana Silk
Ny horonan-tsarimihetsika tsara indrindra sy ratsy indrindra momba an'i Afghanistan
Mandra-paharitra ela no nanamafisany ny anaran'ny Fitsarana Tampony Amerikana
Ellipsis (fitsipi-pitenenana sy lahateny)
Ny momba ny Column Composite
Lisitry ny fanitsiana fanitsiana
10 Mpanakanto taloha izay namaritra ny Blues
Famaritana ny fampihorohoroana